Kedu otu esi emepụta ọtụtụ backlinks ozugbo?
Ugbu a, onye ọ bụla maara na backlinks adịghị kere ohiha. Njikọ njikọ bụ usoro nyocha njirimara nke dị mfe tupu Google emee ka melguin melite. N'oge a, ọ bụrụ na ị dee ọtụtụ isiokwu ma tinye ha na saịtị dị iche iche nke nrubeisi, ọ ga-enye gị enweghị nsonaazụ ọ bụla ma ọ bụ mee ka ị nweta nchọnchọ search engine. Na, cheta, ọ dịghị onye maara ihe Google ga-eme ọzọ. Oge ọ bụla ị na-agbalị ịchọta egwuregwu ịchọrọ algorithm, ịkwesịrị ịdị njikere itinye ikikere.
Otú ọ dị, ọ bụghị ihe mere ị ga-eji kwụsị ime ihe ọ bụla iji nweta nnweta njikọ. Kama nke ahụ, ọ dị mkpa ka ị mụta otú e si esi nweta njikọ dị mma dị mma n'ụzọ ziri ezi.
Ekwela ka onye ọ bụla kwuru na ụlọ njikọ ahụ anwụọ. Backlinks na-abụ ihe kacha mkpa. Otú ọ dị, ọ bụ nanị nchịkwa na ntanetị nwere njikọ nwere ike iweta ihe.
Ezubere nke a iji soro gị nweta ụfọdụ ndụmọdụ bara uru iji rụọ njikọ na ụzọ dị egwu.
Olee otu esi eme ka ntọala ntọala dị mma?
Ka anyị were ya na ị mepụtara ihe ọhụrụ ọdịnaya ma chọọ ịkwalite ya na ibe nsonaazụ ọchụchọ Google. Ebe ọ bụ na ị maara na ịrị elu PR dị elu sitere na njikọ site na saịtị ndị dị mma, ọ gaghị abụ ihe ezi uche dị na ịmepụta njikọ inbound ozugbo o kwere omume? Ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya ịmepụta ọtụtụ njikọ na-abanye n'ime ihe ọhụrụ ahụ n'ime obere oge. Ihe ndị dị otú ahụ ga-enyo enyo maka Google. Ihe ngwọta kachasị mma bụ inyere Google aka ịchọta ma depụta ọdịnaya gị. Ọ ga-ewe oge ma nwekwuo uru na saịtị gị. Ozugbo enwere ike ịdekọ ọdịnaya gị, ị nwere ike ị nweta ihe ọṅụṅụ na-ejikọta mmanụ ma mezie ọnọdụ gị.
Otu esi enyere Google aka ichota ọdịnaya gi?
Iji meziwanye usoro nke ntinye ederede, ị nwere ike iji ngwá ọrụ Alexa. Ndị na-eji ígwè ọrụ weebụ emee saịtị a mgbe niile. Mgbe ị tinye aka na ngalaba gị na URL na ngwá ọrụ ngwá ọrụ nke ngwá ọrụ, ọ ga-agbakwunye ọhụrụ gị, nke kachasị mma na nchekwa data. Mgbe nchọta crawlers kpochapu ozo gi, akwukwo nke mbu gi ga-abia na Google.
Ụzọ ọzọ dị mma iji mee ka bọtịnụ Google gaa ọdịnaya gị bụ ịmepụta datagraphics. O nwere ike ịrụ ọrụ maka gị dịka mgbasa ozi na-enyere aka na nhazi ngwa ngwa na nyocha. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ọdịnaya ọhụrụ gị nwere ọkwá na ntanetị mgbasa ozi, ọ na-enye mgbaàmà nye Google na ndị ọrụ na-achọpụta ọdịnaya ọdịnaya gị yana njikọ dị mma. Ọ pụtara na site na oge ịmalite ịmepụta njikọ ndị dịpụrụ adịpụ gburugburu ụdị ọdịnaya a, njikọ njikọ weebụsaịtị ọ bụla ga-aghọ ihe oriri.
Otú ọ dị, ịkwesịrị ijide n'aka na ị na-ekere òkè ma dị irè maka ọdịnaya ndị na-agụ akwụkwọ dị ka ihe ọhụụ ọ bụla, post ma ọ bụ njikọ kwesịrị inye ndị ọzọ ahịa gị.
Dịka iwu, ọdịnala, ụlọ ọrụ njikọ oge ochie echeghị banyere njedebe njedebe. Otú ọ dị, iji nweta ihe ọṅụṅụ dị mma na ihe dị mma n'anya nke engines na-achọgharị, ịkwesịrị ilekwasị anya na ihe ndị elebara anya gị chọrọ. Ndị na - agụ akwụkwọ gị ekwesịghị ịkwa ụta na ha na - agbaso njikọ njikọ Source .